Myanmar Economy May Suffer fromaSudden Economic Slowdown | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Economy May Suffer fromaSudden Economic Slowdown
Myanmar’s economy is likely to sufferablow fromasudden economic slowdown and its subsequent lower FDI, according to the report on the impact of the COVID-19 on Myanmar’s export published by Myantrade.
Domestic consumption, the main driver of Myanmar economic growth, will weaken asaresult of reduced household spending caused by increased unemployment and resulting income contraction.
Plummeting manufacturing output in industrialized countries translated to severe supply-side disruptions in the domestic manufacturing sector in Myanmar. As the COVID-19 outbreak is hitting major industrialized countries, including China, the United States, and the European Union (EU) the Member States, direct supply disruptions are hindering manufacturing production.
GDP and GDP growth in Myanmar ( constant prices ), 2010–2021 (percent
Weaker regional and global demand will result inadeceleration of export growth in Myanmar. Export earnings strategic sectors including natural gas, tourism, T&G and agricultural products are therefore likely to be severely impacted in the short-to-medium
A supply chain contagion effect is amplifying this direct supply shock as manufacturing sectors in less affected nations such as Myanmar find it harder to acquire the necessary imported industrial inputs to manufacture its export products. This is especially impacting the textile and garments (T&G) industry in Myanmar because over 90 % of raw materials for cut-make-pack garment activities are imported from China.
Contribution to real GDP growth in Myanmar ( year-on-year growth ), 2013 / 14 to 2017 / 18 ( percent)
During the first quarter of 2020, China, the world’s largest manufacturer, registered an unprecedented decline in manufacturing output of 14.1 %, according to the United Nations Industrial Development Organization.
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုတ်တရက် စီးပွားရေးနှေးကွေးမှုများ၏ ထိခိုက်မှုကို ခံရဖွယ်ရှိပြီး ယင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) ကျဆင်းမှုကိုလည်း ခံရမည်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့(Myantrade)က ထုတ်ပြန် သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန် ကဏ္ဍများအပေါ် COVID-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သော ပြည်တွင်းစားသုံးမှု လျော့ကျခြင်းကို ဖြစ်စေရန်လည်း မလွဲမသွေအကြောင်းဖန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကာ မျှော်မှန်းထားသည့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု တိုးတက်များပြားလာမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုး ဆက်အဖြစ် ရရှိနိုင်သော ဝင်ငွေကျုံ့သွားမှုသည်လည်း အိမ်ထောင်စုများ၏စားသုံးမှု နိမ့်ကျခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
GDP and GDP growth in Myanmar ( constant prices ), 2010–2021 ( per cent
ထိုသို့သွင်းကုန်များကျဆင်းမှု သည် ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးကွင်းဆက်များ မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သွားလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း (T & G) နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်များ အပါအဝင် အဓိကမဟာဗျူဟာကျသောကဏ္ဍများ၌ ပြည်ပပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ကာလတိုမှ ကာလလတ် အချိန်ကာလ အတွင်း ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ရန် အလားအလာရှိသည်ဟုအစိရင်ခံစာကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော ထိခိုက်မှုနည်းပါး သည့်နိုင်ငံများရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍများအနေဖြင့် ပြည်ပပို့ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်မှုသွင်းကုန်ပမာဏကို ရရှိရန် ပို၍ခက်ခဲလာသောကြောင်း အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည် (T & G) လုပ်ငန်းအပေါ် ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဖြတ်တောက် – ချုပ်လုပ် – ထုပ်ပိုးသည့် အဝတ်အထည် အလုပ်အကိုင်များ အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၉၀ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အဏိရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၏ ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးပမာဏတွင် ၁၄.၁ရာခိုင်နှုန်းအထိ မကြုံစဖူး ကျဆင်းမှုကို ကုလသမဂ္ဂ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဝယ်လိုအား ပြင်းထန်စွာထိခိုက်မှုများ (demand–side shocks) သည် သွင်းကုန်များကျဆင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။
Previous articleMortgage Stimulates Sluggish Real Estate Market
Next article16,350 Acres Taken Back from Companies for Failing to Implement Anything